🥇 ▷ Nioh 2 wuxuu ku soo bandhigi doonaa seddex baloog oo ku yaal Tokyo Game Show 2019 ✅
Nioh 2 wuxuu ku soo bandhigi doonaa seddex baloog oo ku yaal Tokyo Game Show 2019
Bandhig Faneedka Tokyo 2019 Waxay u dhowdahay geeska, iyo inkasta oo ciyaaraha ciyaaraha 2019 ay dhammaadeen maalmo ka hor, runtu waxay tahay in warshadaha ciyaarta fiidiyowga ay galeen marxaladihi ugu cuslaa ee sanadka. Caadi ahaan, dhammaan noocyada shirkadaha waa weyn ayaa ka qeybgali doona munaasabadda Jaban, oo aan ka dhex heli karno Koei Tecmo. Hadda, waxaan si faahfaahsan u ognahay waxa ay tani noqon doonto mid ka mid ah siidaynnada aad filaysay: Nioh 2.
Sidaas darteed, cinwaanka su’aasha waxay yeelan doontaa saddex qaybood oo kala duwan, waxa ku jira oo lagu sharaxay sidan soo socota: “Tilmaanta Nioh, oo timid in ka badan 2.5 milyan oo nuqul oo adduunka ah, ayaa ugu dambeyntii soo muuqatay. Sharaxaad ayaa ka imaanaysa astaamaha cusub ee ciyaarta, oo ay weheliso ciyaarta tooska ah iyo joogitaanka soo saaraha iyo agaasimaha Fumihiko Yasuda. Xubnaha kale ee caanka ah ee kooxda ka soo muuqan doona waxay kala yihiin Kou Shibusawa, Hisashi Koinuma iyo Yousuke Hayashi. ”
Kadibna waan burburinnaa jadwalka qaybaha kala duwan ee ciyaarta, kaas oo nuxurkiisa lagu raaci karo iyada oo loo maro aaladaha YouTube, Niconic Y Periscope
Sebtember 12: laga bilaabo 06:00 ilaa 06:45, waqtiga Isbaanishka.
Sebtember 14: laga bilaabo 05:00 ilaa 05:45, waqtiga Isbaanishka.
Sebtember 15: laga bilaabo 08:30 illaa 09:15, waqtiga Isbaanishka.
Koei Tecmo wuxuu xaqiijinayaa cinwaanada ay ku qaadan doonto ciyaarta Tokyo Game Show 2019
Markaan udiyaar gareyno isudheellitirka mid ka mid ah dhacdooyinka ugu muhiimsan ee Yurub, sida cayaaraha 2019 ee Cologne, Jarmalka, qaar badan oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee Japan ayaa qaabeeya waxa loogu talagalay…
Nioh 2, kaas oo aad ka heli karto halkan ilaa laba saacadood oo ciyaar ciyaar ah ee Alfa, ayaa lagu dhawaaqay wakhtigaas iyada oo siidayn gaar ah loogu talagalay Ciyaarta 4 inta lagu gudajiro sanadka 2019. Waqtigan xaadirka ah ma hayno taariikh sax ah oo shaqada la isweydaarsado si iftiinka loo arko, laakiin waa inaanu meesha ka saarin inay si sax ah Tokyo Game Show 2019 u xallisay sirtaas oo kale.
Nioh 2 wuxuu kasoo muuqan doonaa sedex paniko ah ciyaarta Tokyo Game Show 2019 Cristian M. Villa